Maxaa Keenay In Wayne Rooney Iyo Cristiano Ronaldo Isku Gacan Qaadan Xafiiska Sir Alex Ferguson Waakan Gary Neville Oo Ka Shifay Sirtaasi? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Gary Neville ayaa shaaca ka qaaday in Cristiano Ronaldo iyo Wayne Rooney ay isku gacan qaadeen xafiiska Sir Alex Ferguson maalintii ugu horeysay ee ay tababarka ku soo qaataan Manchester United ka dib Koobkii Adduunka ee 2006.
Asxaabta kooxda United ayaa ku lug yeeshay ciyaar caan ah oo ka dhacday Koobkii Adduunka ee Jarmalka, halkaasi oo Rooney laga saaray ka dib markii uu ku garaacay Ricardo Carvalho guushii England ee wareega 8da ee Portugal.
Ronaldo ayaa cadho ka muujiyay England ka dib markii uu ku orday garsooraha inuu hogaamiyo mudaharaadkii Portugal ee ahaa in Rooney shaqada laga eryo, ka dib waxaa laga qabtay kamarad uu ku garaacayo kursiga keydka kooxda ka dib markii amar lagu siiyay.
Tani waxay dhalisay in khilaaf ka dhex dhaco qolka labiska Old Trafford, in kasta oo daafaca hore ee United Neville uu sheegay in Ferguson uu si dhaqso leh wax uga qabtay dhibaatooyinka ka soo gaadha kooxda markii ay ciyaartoydu ku soo laabteen tababarka ka hor xilli ciyaareedkii 2006-07.
Isaga oo ka hadlaya Sky Sports, Neville wuxuu yidhi: “Maalintii ugu horaysay ee tababarka, waxa laygu yeedhay xafiiska iyo Wayne oo uu igu yidhi macalinka, wuxuu doonayay inuu arko bal inay jiraan wax dhibaatooyin ah, waxkastoo hangovers ah.
“Runtii run ahaantii waxay ahaayeen saaxiibo aad u wanaagsan, waxay ahaan jireen is dhexgalka bulshada Patrice Evra, Rio Ferdinand, Cristiano iyo Wayne aad ayey isugu dhawaayeen.
“Sababta oo ah dalka oo dhan ayaa ka soo horjeeday (Ronaldo), waxa ay dareemayeen sidii David Beckham oo kale oo qolka labiska ah Waxaasi ayaa jiray wax ku saabsan England iyo Manchester United, iyadoo taageerayaasha England ay aadayaan ciyaartoyda United, ma jirin jacayl lumiyey si kastaba.
“Markii Beckham uu soo noqday 1998dii qof walba oo United jooga ayaa isku soo taagayay isaga, waana isku mid kan uu sameeyay Cristiano sanadkii 2006, taasna waxay ka caawisay inuu tago oo caddeeyo qof walba inuu khaldan yahay.
Waxay ahayd subaxdii ugu horreysay ee xilliyada fasaxa, waxay gacanqaadeen gacan, wax dhib ah malahan wax kasta Si caddaalad ah, Wayne aqoon buu u leeyahay inuu ogaado in garoonka kubadda cagta wax walba ay ku socdaan waxaan ku leennahay maskax isku mid ah United wuxuu Cristiano ahaa isagoo isku dayaya inuu u guuleysto waddankiisa, Wayne ma fileynin wax ka duwan sidii hore, mana doonayo aniga. ”
Dadaalada nabad ilaalineed ee Ferguson ayaa si weyn abaal marino lagu muteystay, iyadoo United ay ku guuleysatay horyaalkii Premier League 2006-07 waana markii ugu horeysay seddex kulan oo isku xigta oo ay kuwada ciyaarayeen halyeeygooda Ronaldo iyo Rooney.
Ronaldo ayaa fure u ahaa dhamaan seddexdii koob ee uu qaaday ka hor inta uusan u dhaqaaqin Real Madrid xagaagii 2009 rikoorkii adduunka ee 80 milyan ginni ($ 100m).